Tababar - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Tababarka
Hoy la'aanta Gobolka Washington waa mid wajiyo badan leh. In kasta oo awood u lahaanshaha guryaha iyo sinnaan la'aanta hantida ay yihiin sababaha ugu horreeya ee hoy la'aanta, haddana waxaan ognahay khibradaha qaarkood inay isku dari karaan khibradda shaqsiyeed ee hoy la'aanta, taasoo ku adkeyneysa iyaga inay helaan ama helaan ilaha jira. Waan ognahay in dhibaatada iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ay ku badan yihiin dadka guri la'aanta ah iyo in dadka midabka leh iyo bulshada LGBTQ ay si aan habooneyn u saameeyeen. Ujeeddadaas, deeqo badan oo Ganacsi oo laga helo guri-laaweyaasha ayaa u baahan bixiyeyaasha adeegga inay muujiyaan karti-xirfadeedka ugu fiican. Hadafkeenu waa in tababaradaani ay ku sii diyaariyaan deeq bixiyaasha aqoonta iyo aaladaha loo baahan yahay si loo kobciyo u adkeysiga shaqsi, barnaamij iyo heer hay'ad oo xoojinaya jawaabta beeshooda ee hoy la'aanta.
Tababarka OFAH iyo Isuduwaha BVS
Hordhaca Hoyga Marka Hore
Guriyeynta Koowaad waa qaab gargaar guri la'aan ah oo guryo joogto ah siiya dadka ay la soo daristo hoy la'aanta. Fiidiyowgaan ayaa sharxi doona sida qaabkani u hago aaminaadda in dadku u baahan yihiin meel ay ku noolaadaan ka hor intaanay u xaadirin wax kasta oo aan muhiim ahayn, sida shaqo helidda ama daaweynta.
Guji sawirka kore si aad u daawato muuqaalka.
Dhagsii si aad u daawato ama u daabacdo bogagga.
La Shaqeynta Dadka Ka Badbaaday Rabshada Guryaha
La shaqeynta dadka ka badbaaday rabshadaha guriga ee guryaha aan hoy laheyn waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Fiidiyowgaan wuxuu sharxi doonaa isgoyska u dhexeeya rabshadaha guriga iyo guri la'aanta, sida loo aqoonsado loona jawaabo rabshadaha guriga, qorsheynta amniga iyo sida ugu wanaagsan ee loola wadaagi karo u doodayaasha.
Riix halkan si aad u daawato fiidiyaha
Hordhaca Guryaha Degdega ah
Guri deg deg ah waa faragelin muhiim u ah nidaam kasta oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka. Fiidiyowgaan ayaa sharxi doona naqshadeynta barnaamijka iyo sida loo caawiyo shakhsiyaadka iyo qoysaska aan u baahnayn taageerada degdegga ah iyo kuwa socda si dhaqso looga baxo hoy la'aanta uguna noqdaan guryo rasmi ah.
Hordhaca Xalinta Dhibaatada (Weecinta)
Weecintu waa qaab hal abuur leh oo lagu xaliyo dhibaatooyinka si looga caawiyo dadka inay xalliyaan mashaakilkooda guryo, si ku habboon intaan la gelin nidaamka ka jawaabidda dhibaatooyinka. Weecinta waxay isticmaashaa wada hadalada sahaminta si dadka looga caawiyo inay aqoonsadaan ikhtiyaarrada guryaha ee macquul ah iyadoo lagu saleynayo kheyraadkooda. Weecinta waxaa la socon kara adeegyo waqti-gaaban ah oo ay ku jiraan kaalmo maaliyadeed hal mar ah.
Kaqeybgal Horumarineed Barnaamijyada iyo Nidaamyada
Kaqeybgalka Horusocodku waa qaab lagu caawinayo qoysaska inay sida ugu dhakhsaha badan ugusoo afjaraan hoy la'aanta, inkasta oo ay jiraan caqabado, oo leh dhaqaale iyo taageero yar Fiidiyowgaan wuxuu sharxi doonaa qaabdhismeedka kala duwan ee u dhexeeya barnaamijka iyo xeeladaha nidaamka.
Ka Qeybgalka Milkiilaha Guryaha Degdegga ah
Kaqeybgalka Milkiilaha wuxuu dib u eegis ku sameeyaa qaybaha asaasiga ah ee Degdegga Degdegga ah wuxuuna sharxayaa dhiirrigelinta milkiilaha. Bandhiggan PowerPoint wuxuu soo bandhigayaa fikradda ah la shaqeynta milkiilayaasha guryaha sidii shuraako. Waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato sida loo helo milkiileyaal guri, xiriir la dhiso, iyo faahfaahin ku saabsan Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha Washington.
Halkan guji si aad u aragto bogagga
Tababarka Caafimaadka Maskaxda
Koorsada Tababarka Caafimaadka Maskaxda, kaqeybgalayaashu waxay sahamiyaan welwelka guud ee caafimaadka maskaxda, sababaha halista, calaamadaha digniinta, iyo xeeladaha wax kaqabashada si loo caawiyo qof ku jira xaaladaha dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka aan ahayn. Tababarku wuxuu siiyaa qalab shaqsiyeed iyo ilaha bulshada ee ugu waxtarka badan ee la heli karo. Waxay ku soo gabagabeyneysaa is-daryeelid iyo naxariis qanac / daal ah faham wanaagsan iyo bogsiinta caafimaadkaaga maskaxeed.
Xaraashka Tababarka Caafimaadka Maskaxda
Sinaanta Jinsiyada ee Adeegyada Hoylaawayaasha
Tababarkani wuxuu ka caawiyaa kaqeybgalayaasha inay gaaraan faham la wadaago oo ku saabsan muujinta maanta ee midab takoorka hay'adaha iyo sida loo hirgeliyo aaladaha iyo dhaqamada loogu talagalay in lagu hubiyo howlaha ururkaaga, siyaasadaha, iyo barnaamijyada inay la jaan qaadaan qiimaha sinnaanta jinsiga iyo caddaaladda bulshada.
Tababar ku saabsan Sinaanta Jinsiyada warqad macluumaad (PDF)
Tababarka Naxdinta 1: Daryeelka Dhaawaca-Xog-ogaalka ah
Tababbarka Adeegyada La-Socodka-Xog-waranku wuxuu siiyaa ka-qaybgalayaasha wacyi-gelinta dhibaatada iyo sida ay u saameyn ku yeelato awoodda qofku u leeyahay inuu la qabsado una maareeyo waxa loo arki karo jawi khatar ah Daryeelka la wargeliyey ee loo yaqaan 'trauma war' waa hab ujeedkiisu yahay in lagu mashquuliyo dadka taariikhdooyinka naxdinta leh, in la aqoonsado jiritaanka astaamaha uur-ku-taallada iyo in la aqoonsado doorka ay uur-ku-taallada ku yeelatay noloshooda.
Diyaargarowga Tababarka ee Dhaawac-Warran
LGBTQ + Tababar Xog-ogaal ah
Tababbarka Daryeelka Xog-warran ee Queer-Information ayaa u diyaariya bixiyeyaasha aqoonta, xirfadaha iyo kalsoonida lagama maarmaanka u ah inay siiyaan adeegyo aamin ah oo xaqiijinaya macaamiisha LGBTQ + barnaamijyadooda.
LGBTQ + fasalka wargalinta macluumaadka
Tababarka Naxdinta 2: Adeegyada Ka Jawaabidda Dhaawaca
Tababbarka Daryeelka-Xog-warran ee Cilmiga ah waxaa looga baahan yahay shuruud horudhac u ah tababarka Adeegyada Ka-jawaab-celinta Dhaawaca. Adeegyada Kajawaabidda Dhibaatada waxaa loogu talagalay kaqeybgalayaasha doonaya inay horumariyaan ama taageeraan urur ama barnaamij ka jawaabaya dhaawacyada. Tababbarka ayaa caqabad ku noqon doona kaqeybgalayaasha si kor loogu qaado loona soo celiyo bogsashada, caafimaadka iyo fayo qabka iyadoo si taxaddar leh loo tixgelinayo sida ay u arkaan shaqadooda, qaabeynta bay'adooda iyo la macaamilka dadka ku hareeraysan.
Diyaargarowga Tababarka Dhaawac-Jawaab leh
Jadwalka Tababbarka Fudud
Eeg jadwalka tababarka soo socda